ubusazi- ukwenza ukuba ibluetooth isebenze kwimowudi engafumanekiyo ayikuthinteli ukufikelela kwi-smartphone yakho
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ubusazi- ukwenza ukuba iBluetooth isebenze kwimowudi engafumanekiyo ayikuthinteli ukufikelela kwi-smartphone yakho
Abanye abasebenzisi be-smartphone bathanda ukuba iBluetooth ivulwe, kodwa gcina izixhobo zabo kwimowudi engafumanekiyo ukuze ezinye izixhobo ezixhumeneyo zingaziboni. Kuyavela ukuba olu lumkiso luyintsomi nje, kwaye ukugcina isixhobo sakho esingafumanekiyo asizukukhusela ngokupheleleyo kubahlaseli abazimisele ukungena kwifowuni yakho. Kukho izikena kunye nezixhobo zokucoca ezikhoyo ezifumana isixhobo sakho kunye nedilesi yeBluetooth kwaye uvumele ukungena kungene nokuba kusetelwe kokungafumanekiyo.
Okona kubheja kwakho kugcina iBluetooth icinyiwe. Ukuba sesichengeni okubonakalayo okuyenza lula inkqubo yipassword 'yefektri' esetyenziswa kuninzi lwezixhobo zeBluetooth, nto leyo eye kuthi ga kwi-'000 'okanye' 1234 '. Nje ukuba umntu afumbe idilesi yakho yeBluetooth, kunokwenzeka ukuba baseke unxibelelwano basebenzise le khowudi yePIN. Ngokwabaphandi bezokhuseleko, le nkqubo ilula ngokungenangqiqo eyenza ukuba iimeko ezininzi ze-Bluetooth eyevesdropping kwaye zibizwe ngokuba yi-'Bluejacking '-ukuqhagamshela kwifowuni kunye nokuthumela umxholo wogaxekile. Ke enye yezona zinto zingcono onokuzenza malunga noku kukutshintsha iphasiwedi yakho ye-Bluetooth ibe yi-PIN encinci.
Indlela le ehamba ngayo kukuba uninzi lwezixhobo zabathengi zixhomekeke kwidilesi yeBluetooth yedilesi (BD_ADDR) ulwazi njengesixhobo sokhuseleko. Ukusebenza ngendlela efumanekayo, izixhobo zeBluetooth ziphendula imiyalezo yesicelo sephepha esikhutshwe zezinye izixhobo ezineenkcukacha zazo ze-BD_ADDR. Kwimowudi engafumanekiyo, nangona kunjalo, izicelo zolwazi ze-BD_ADDR azihoywa. Kungaba yinto eqhelekileyo, kodwa izixhobo kwimodi efumanekayo zisengozini ngakumbi njengoko zichongwa ngokulula ngezixhobo ezinjenge-BTScanner ethumela imiyalezo yokucela iphepha ephindaphindwayo kuzo zonke izixhobo zeBluetooth ezikuluhlu.
Zithini iiapos ezisusa apha? Ukugcina izixhobo zeBluetooth ezingafumanekiyo kuluqheliselo olulungileyo, kodwa ayizukuphelisa abahlaseli. Bayakwazi ukuthumela imiyalezo yesicelo kwisicelo ngasinye esiqhelekileyo se-BD_ADDR okanye i-OUI de kube i-BD_ADDR epheleleyo yaziwe. Nokuba kunjalo, okanye banokusebenzisa uluhlu lwezinto eziqhelekileyo BD_ADDR izimvo ezivumela umhlaseli avavanye onke amaxabiso e-Bluetooth OUI angaphantsi kwemizuzu emi-2. Ekugqibeleni, iBluetooth yeyona nto ilungileyo icinywayo ngaphandle kokuba uyisebenzisile ukudibanisa isixhobo okanye ukuhambisa ulwazi.
umthombo: NGAPHANDLE kweZiko leTekhnoloji nge MakeUseOf
dlala i-youtube kwimvelaphi ye-android
Qaphela i-20 sd khadi slot
Nini kunye nendlela yoku-odola kwangaphambili i-iPhone 7 okanye i-7 Plus (iApple, iVerizon, i-AT & T, iT-Mobile kunye neSprint)
Ukuhlaziywa kwe-AT & T yeGalaxy S7, i-S7 Edge, Qaphela i-4 kunye ne-Note Edge izisa i-patch yokhuseleko ye-Android yangoku
Kwi-Android 10, iYouTube & apos; umxholo omnyama ungabotshwa kuseto olubanzi lwenkqubo
Izixhobo ezivulekileyo zoLawulo lweMithombo yoVavanyo
REST-Imizekelo eqinisekisiweyo: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
Ungasitshintsha njani isiqalisi esingagqibekanga seTouchWiz kwi-Samsung Galaxy S5